Isithuba esiphakamileyo esiphindwe kabini sokunyusa ingroud L4800 (E) ixhotyiswe ngohlobo lwebhulorho yenkxaso yengalo yomvelisi kunye neFektri | IsiTonghe
Ubunzima bokuphakamisa ubuninzi yi-3500kg, efanelekileyo ukuphakamisa ngexesha lokulungiswa kwesithuthi.
Icandelo eliphambili lingcwatyelwe phantsi komhlaba, uyilo lumbumbulu, kwaye umphezulu womsebenzi wolwakhiwo usezantsi, ukonga utyalo-mali olusisiseko.
I-pallet yenziwe ngombhobho wensimbi kunye neplate yensimbi emva kokugoba, ubume buqwalaselwa, kwaye ukuphakanyiswa kuzinzile.
Ngokweemfuno zomsebenzisi, emva kokubuya kwesixhobo, ingalo yenkxaso inokuyilwa ngeendlela ezimbini zokupaka: 1. Ukuwa emhlabeni; 2. Ukuntywila emhlabeni, umphezulu wengalo yenkxaso ugungxule umhlaba, kwaye umhlaba mhle ngakumbi.
Uyilo lolwakhiwo olulula luqinisekisa ukuba imeko-bume yokusebenza ivulekile kwaye igudile xa isithuthi siphakamiselwe ukugcinwa.
Ukuxhotyiswa ngenkqubo yokuvumelanisa engqongqo yokuqinisekisa ukungqamanisa kokuphakanyiswa kweposti ezimbini. Emva kokuba izixhobo zilungisiwe kwaye zimiselwe, akusekho mfuneko yokuphinda ulungelelwaniso lokusetyenziswa kwesiqhelo.
Ukuxhotyiswa ngokutshixa oomatshini kunye nesixhobo sokukhusela ngesanti kubunzulu baphantsi, sikhuselekile kwaye sizinzile.
I-L4800 (E) ifumene isatifikethi se-CE
Egqithileyo Iposti ephindwe kabini yokunyusa i-L4800 (A) ethwele i-3500kg
Okulandelayo: Post kabini ingroud lift series L5800 (B)
Ukuphakanyiswa kweMoto eNye ePhathekayo, Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa phantsi komhlaba, Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa okungaphakathi, Isilinda esibambeleyo esinye, Isiphatho seHydraulic Scissor seMoto, Iselfowni ePost Post yokuPhakamisa imoto,